Coulda Izahay Me Lyrics — Trip LEE - OFISIALY SITE
Natao mba hitondra tahaka Azy, dia mihevitra fa sahirana fiends
Satria tsy teo Aho, rehefa nitifitra ny olona
Tsy afaka mamaha toe-javatra, Tsy milaza fa afaka
Fa fantatro ainy ho tanora lehilahy mainty hoditra
Angamba tsy ho very saina ny sasany tsy azoko
Fa angamba ianao nety
Raha nijery ny fiainako ary teo amin'ilay nitsanganako
Ampiasao ny masoko mba hijery ireo eny an-dalambe
Loatra tena rehefa mahatsapa toy izany coulda nisy ahy
Alao sary ahy ho toy ny zatovo
Maka avy ao amin'ny fivarotana zava-pisotro aho, rehefa nahita
Ny cashier mijery ahy, dia kiakiaka
Dia manondro eo amin'ny valahana, ary milaza ahy aho nahita
Fa haingainareo ambony, I Tsy fantany fa Izaho dia ny hoe mampatahotra
Ary tsy fantany fa Izaho afaka hitifitra anareo amin'ny BlackBerry
Very hafahafa, fa nahita ahy toy ny jiolahimboto
Rehefa tsy nahazo aho ny raharaha, tsy nangalatra na nividy zava-mahadomelina
Na ahoana bout ny fotoana izay aho, nanidina ny fampisehoana
Feno fifaliana, finna Rap ho efitrano feno ry namana
Any ivelany dia mahita fa misy basy ao ny tavako
Rojo vy ny tanako, nipaipaika teo amin'ny andilany
Tena mitovy Ol, ihany Ol
I mifanaraka ny famaritana ny mpanao heloka bevava izay fantany
Nasehony ahy izy ireo sary, eo moa
Mananihany ahy ve ianao? Tsy mijery ny toy
Nieritreritra tsara ny polisy nataontsika raha mitady ny tsara
Mainty rehetra ny olona fantatro
Azoko tantara toy ny, mijinja izay tsy nafafiko
Raha mihevitra ianao hoe jiolahim-boto avy amin'ny Hanketo
Manao izay tsy zava-dehibe raha toa ka teo amin'ny fehikibony amin'ny paompy
Jereo Tsy fantatro raha nisy Mike Brown ny tanany ny
Fa manoratra aho nanao hoe: homie I'ma mitsangana
Ary milaza aminareo I'ma Tsapako ao amin'ireo no mijery eny an-dalambe
Ka ataovy hoe fa tena rehefa mahatsapa toy izany coulda nisy ahy
Lanitra mahatsiaro grey, maso mena
Mainty sy fotsy fifandonana, rahona ny lohany
Mandra-pahoviana mandra-nandre ny zavatra nataonay hoe:
Mandra-pahoviana izy ireo hihaino izay nolazaiko hoe:?
Hanao feo avy ny soa rehetra polisy
Miady ratsy ry zalahy, manao tsara fiatoana
Halako fa ny ronana biriky
Tamin 'ny farany izy ireo mba hiezaka ny vongana anareo rehetra ny mpisoloky
Izaho te-hilaza amin'ny rehetra ny tanora lehilahy mainty hoditra
Fantatro fa hahatsapa ho toy ny tsy afaka isika vao handresy
Fa amin'ny fahatezeranao dia tsy manota
Aza manamafy izay mieritreritra
Aza avela tsy hisy hilaza isika no tsy nahazo mendrika
Ny sasany dia miezaka hanidy antsika dia tsy miasa
Fantatro fa tsy rariny, fa fantatsika fa miahy
Ary indray andro dia Ho hamafa ny ranomaso
Aiza ny fanantenana ny amin'ny? Ahy no ao aminy
Aiza ny fanantenanao amin'ny? Ahy no ao aminy
Natao izahay asa atao isika, fa ny fanantenako dia ao aminy
Izy ireo nahazo ny asa tokony hatao koa, fa ny fanantenako dia ao aminy
miresaka momba: Coulda Izahay Me — Trip LEE
Jordania • Desambra 4, 2014 amin'ny 12:53 aho • navalin'i
Hitako ny sasany amin'ireo hevitra natao ao amin'ny tononkira, ary fantatro io hira io dia midika hoe, fa mahatsapa toy izany hira izany fanomezana izany ao korontana.
Ny fizarana faharoa ao amin'ny andininy faha-3, miresaka momba ny hoe Nosafosafoiny teo satria “mifanentana” ny famaritana ny heloka bevava. I Efa Nosafosafoiny teo anatrehan'i, dia teo amin'ny lafin'ny ny interstate rehefa vorompano ho 3 kilaometatra, satria nanao ny Beanie sy sweatshirt izay nahatonga ahy mitovy aho dia hatramin'ny lafiny harsher tanàna. Tsy marina izany, fa fiara aho ny raibenao Impala miaraka amin'ny dadako ao amin'ny mpandeha fanaovam-panavotana, ary teny hafa momba antsika ny sasin-tenin'ny niverina avy teo an-toerana fivarotana Apple izay nandatsaka intsony ny Macbook mba ho raikitra. Antsoy izany profiling, izany hoe na inona na inona, nefa na inona na inona afa-tsy ny lokon'ny ny hoditro. Manamboninahitra iray dia fotsy, ny anankiray kosa dia mainty. Izany no ahy.
Andalana voalohan'ny andininy voalohany: “Aza tsy misy olona te-hihaino ny fanaintainana”. Pretty antoka tsara fa mahafantatra ny dikan'ny hoe. ny teny “ny” amin 'izany andian-teny, amiko mahatsapa toy ny tafasaraka amin'ny hira, toy ny tsy hahatakatra ny zavatra ny tolona dia, na izay tsapanao. Mba tsy ho afaka hahatakatra, fa Andriamanitra nanome ahy ny fitaovana hanohanana, alalan 'ny vavaka.
Manohy amin'izany eritreritra, “Isika rehetra natao araka ny endrik'Andriamanitra fantatrao”. Misy ny rehetra mifanohitra ny hira. Andriamanitra nahary antsika araka ny endriny, ary tsy misy loko, fahasembanana, lahy sy ny vavy na ny fiandohan'ny firenena mbola nanao hijery an'Andriamanitra na oviana na olona na dia namorona fomba hafa, Koa nahoana isika no? Nahoana aho no tokony handini-tena na fomba hafa avy aminareo, sy ny mifamadika amin'izany?
Afaka mahazo bebe kokoa, fa mahatsapa aho hoe ampy. Trip, ho toy ny mpanara-dia an'i Kristy no mitafy ny finoantsika, tsy mijery ny olona iray hafa na misy hitondra azy ireo amin'ny fomba hafa. Tsy manary Self, ary mifantoka ary ny saina Azy, ary na inona na inona ny fomba na iza na iza amintsika mahatsapa, rehefa milaza isika Kristianina, ny fomba lalàna sy ny zavatra izay milaza ny olona manome taratry ny fomba mahita Azy amin'ny alalantsika. Koa raha mety ho anao, tokony hijery anao na amin'ny fomba hafa? Ahoana raha dia ahy?
Ny hevitra dia, ho “Colorblind” eto amin'ity tontolo ity.
Tory • Desambra 4, 2014 amin'ny 10:13 aho • navalin'i
rahalahy Jordana, dia afaka maneho izany fotsiny aho “colorblindness” Tsy ny valin 'ireo olana? Avelao aho mifamadika izany haingana amin'ny hazakazaka ny lahy sy ny vavy. Lehilahy sy ny vehivavy dia tena samy hafa, ary izay zavatra tsara! To ho “lahy sy ny vavy jamba” mety ho tena manimba, satria ho tapaka ho azy ny maha zava-dehibe ny fahasamihafana, ary hahatonga antsika malahelo avy amin'Andriamanitra. Ny zavatra tiako holazaina amin'izany dia ny hoe tahaka ny olona, famindram-po mitady ho toy ny tsy tonga ho azy tahaka izao ho an'ny vehivavy (Mariho ny teny mazàna!). Raha nijery ny lehilahy ihany, dia malahelo isika avy amin'ny famindram-pon'Andriamanitra. Isika dia mamaky momba izany, fa tsy misy azo tsapain-tanana jereo, olombelona ohatra ny famindram-pony (Fantatro aho niteny aho mahery setra generalities, afa-tsy ny hanao teboka).
Hazakazaka dia toy izany koa. Raha ny marina izahay tena samy hafa, mazava ho! mainty hoditra, Aziatika, fotsy hoditra, Hispanics, Matetika isika tena samy hafa eo amin'ny fijery, olo-, kolontsaina, sns. Izany no zavatra tsara tarehy. Amin'ny alalan'ny kolontsaina iray mijery fitiavany ny hafa, dia hitantsika fa Andriamanitra dia liana Andriamanitra (liana ny zavatra marina). Amin'ny alalan'ny kolontsaina iray mijery ny “mahari-po(hetra),” dia hitantsika fa Andriamanitra dia faharetana aminay, ary tsy mora tezitra. By mijery kolontsaina samy hafa, dia tena mahazo mahita sary maro 'Andriamanitra.
tsy fanontaniana, isika rehetra ny hoentina toy izany koa, satria isika rehetra noforonina ao amin'ny Imago Dei. Na izany aza, isika samy hafa, ary maninona! Antsasaky ny mainty aho, antsasaky ny fotsy, ary iray taonina “mainty toetra,” ary “fotsy toetra.” Okay. Tsara izany! Antenaina dia mampiseho amintsika zavatra momba an'Andriamanitra! I hifidy fankalazana sy ny fianarana ny fahasamihafana fa tsy colorblindness, ary ny marina ihany no mety hitranga fankalazana ao amin'ny filazantsara.
Nate • Desambra 6, 2014 amin'ny 2:45 PM • navalin'i
Ny teninareo dia aingam-panahy ahy hanoratra hira mampiasa miovaova toy ny teny: “Isika rehetra noforonina ao amin'ny Imago Dei, na izany aza, samy hafa isika ary izany mihoatra noho ny OK”. Misaotra anao noho ny fandraisana andraikitra hiteny, ary kilalaon'afo fahendrena. Ny sisa amin'ny hira efa lasa hanaporofo ny tenany ho toy ny tsy manam-paharoa fanomezana fotsiny ny teny mba hanehoana ny firaisan-tsaina eo Anivon'ny Tsy Fitoviana sy ao amin'i Kristy.
Nate • Desambra 6, 2014 amin'ny 2:46 PM • navalin'i
miala tsiny….*Tory *….tsy Tori.
lanitra-avo • Desambra 4, 2014 amin'ny 10:53 aho • navalin'i
Marina izay nolazainao Jordana. Izaho hanao hoe: izao zavatra iray loha: Raha tokony ho colorblind, afaka mahita isika fa ny foko hafa fiaviana toy ny famoronana? Isika miara-mijoro miaraka Aminy eo ambany ny anaran 'i Jesoa. Izy no faneva – tsy maninona raha izahay avy Ferguson, Cali, Oregon, Alabama na New York. I Jesosy no teboka ifantohany. Ary amin'ny kolontsaina izay te hampisaraka antsika ho “vitsy an'isa” sy ny vondrona isan-karazany, dia hijoro ho ny vatan'i Kristy, ambany Azy.
Fa izaho no mankasitraka ny Fahatakarana ny Hevitry ny hira. Misaotra anao fananganana ny Fanjakana ho voninahiny!
Josh • Febroary 2, 2015 amin'ny 1:09 PM • navalin'i
diany, Misaotra ho an'ireo hevitra. Misaotra anao mizara ny traikefa toy ny olona ny loko izay mihevitra ny ny maha izy azy sy ny mampalahelo ny toe-kolontsaina amin'ny alalan'ny Lens ny Filazantsara. Enga anie ny Tompo hanohy hanorina ny Fanjakany sy ny lazany noho ny asa. Misaotra anao.
Gabriel • Desambra 4, 2014 amin'ny 2:13 aho • navalin'i
Misaotra anao Trip, ianao tena modely sy ny fitaomam-panahy. Tohizo ny asa tsara sy ny miantehitra amin'ny Tompo tari-dalana.
Michael • Desambra 4, 2014 amin'ny 5:17 aho • navalin'i
Izany dia midika hoe saddening mamaky ny zava-nitranga rehetra mandeha ankehitriny eto amin'izao tontolo izao. Ny tsara sy ny NYC ho any Kenya. Painfull olana mbola tsy ianarana avy amin'izy ireo sy hitandrina manao izany ihany koa. Tonga ny fotoana tena lasa ireo rahalahy mpiandry
Michael • Desambra 4, 2014 amin'ny 6:01 aho • navalin'i
Trip Lee, izany dia tsy afaka tonga amin'ny fotoana hafa. Mila manamafy ny hevitra bebe rehetra dia midika hoe #couldabeenme
Cristella • Desambra 4, 2014 amin'ny 6:05 aho • navalin'i
Misaotra anao dalana ho an'ny bilaogy sy ny Zanaka
Richard • Desambra 4, 2014 amin'ny 7:37 aho • navalin'i
Tena mampalahelo ny mihaino, tena mbola tsy afaka an-tsaina ny fomba y'all mahatsapa fa mahita fa be dia be ny vahoakan'i mainty mahazo fotsiny ny fifadian-kanina tena marina… halahelo an'ireo U Al, Mahatsapa tsy manan-kery mihitsy…
Richard • Desambra 4, 2014 amin'ny 7:38 aho • navalin'i
*fotsiny = nitsara
Todd • Desambra 4, 2014 amin'ny 7:48 aho • navalin'i
mafonja, tsara tarehy namolavola tamin-kafetsena. Avy mitondra taona ny masoko rehefa kely indrindra andrasana izany. I ihany no hita vao haingana ny mozika ary efa iray manentana fanahy mahagaga hita tamin'ny fotoana teo amin'ny fiainako Andriamanitra heverina dia izany aza. Be fiderana ho anao, rahalahy tanora.
Louis • Desambra 4, 2014 amin'ny 8:09 aho • navalin'i
Izany no tena vatosoa, Trip.
Kisy • Desambra 4, 2014 amin'ny 8:14 aho • navalin'i
Love ity hira ity! Ny manantena Azy koa!! Ampio izahay RAY!!!
miresaka momba: New Music: Trip Lee – “Coulda Izahay Me” |
Robert • Desambra 4, 2014 amin'ny 9:42 aho • navalin'i
Matokia an'Andriamanitra ary Tandremo tsara Manao Trip! Aoka Hamirapiratra ny Fahazavanareo.
Amanda • Desambra 4, 2014 amin'ny 12:51 PM • navalin'i
Ny milaza fa Andriamanitra no tsy mahita loko dia tsy araka ny Baiboly. (Jordania) Milaza ny Baiboly fa Andriamanitra no namorona ny hafa firenena sy ny samy hafa fiteny ny fisehosehoana ny fahalehibiazany. Tsy tokony mody fa tsy misy! Raha hoy ianao: ianao te-ho any ny mpino izay miresaka ireo zavatra ireo amin'ny alalan'ny vavaka, na inona na inona Avenue dia nahoana ianao no miezaka ny miady hevitra ny hira? Izy no mizara ny hanisy ratsy. ny fanaintainana. Zavatra izay mainty hoditra, mandalo. Nahoana no tsy maintsy mahatsiaro ho lavitra azy nilaza fa. Nahoana ny anankiray amin'izany, ratsy traikefa no hanapaka avy na hanafoana ny hahatonga loza sy ny diso fanantenana fa maro ny mainty hoditra tsy maintsy hiatrika isan'andro. Tsy indray mandeha fotsiny izany. Ny vadiko tsy maintsy mandeha foana ny ambony sy tany an-dafin'i mba hahazoana antoka fa toy ny tsy tonga eny fandrahonana ny olona!! Nahoana? Nahoana no lazaina fa mainty izy ka heverina ho mampatahotra sy nandrahona. Nahoana no lazaina fa mahay maneho hevitra dia miresaka ny olona mahatsapa izy ireo fa mila manao ny fanehoan-kevitra, Wow ianao tsy izay andrasana, na dia tsy toy ny mainty hoditra hafa. Moa ve ny olona miakatra ho any aminareo, ary gaga izy ireo teny an-dalana no miteny? Mijanòna ho min ary mandre fotsiny ny olona avy, tsy voatery miombon-kevitra na hahatakatra. Mampiseho fotsiny ny sasany, ary miara-miory hanampy ho tafiditra ao anatin'ny vahaolana! Misaotra noho ny fizarana ny fonao Trip Lee.
Abigail • Desambra 4, 2014 amin'ny 1:28 PM • navalin'i
Trip, Izany no tsara.
Dia hanisy ratsy ny foko, satria mbola misy ny antony hanoratra hira toy izao. Mbola Misy ady ho an'ny mainty hoditra ainy.
Angamba indray andro any isika dia afaka manao izany marina.
hanao • Desambra 4, 2014 amin'ny 2:44 PM • navalin'i
Tohizo ny asa tsara Trip! Ny teny sy ny vavolombelona dia mahery vaika! Enga anie ny Tompo hitahy anao, hiaro anao, Hampamirapiratra ny tavany aminareo!
Tyrone • Desambra 4, 2014 amin'ny 3:45 PM • navalin'i
Charlotte • Desambra 4, 2014 amin'ny 4:25 PM • navalin'i
Trip Lee olona,
Afaka milaza fotsiny aho fa efa nitombo ho tia ny lehibe amin'ny maha-azo itokiana ny feonao?! Andray! Mahay izany dia manta sy ny tena! Izany no lehibe Feat. Rahalahy. Very marina, Tena malahelo aho hihaino ny rehetra ny kolikoly izay efa aseho eto amin'ny rivotra, ary dia adala ny fomba fitongilanana ary ambony ambany izao tontolo izao dia afaka ny ho – Diso fanantenana tanteraka aho amin'ny hazakazaka ihany izay efa stereotyped sy amoahana ny amin '. Ny lahatsary avy any Brooklyn NY no iray amin'ireo zavatra saddening indrindra hitako tamin'ny ela.
Victoria • Desambra 4, 2014 amin'ny 4:28 PM • navalin'i
Tiako ny zavatra Jordana dia nanao hoe:. Izaho koa mba mainty America, vehivavy, fa ny hevitro, lahy sy ny vavy dia tsy mitana toerana goavana anjara asa, vehivavy mainty azo lasibatra amin'ny fomba manavakavaka ihany koa. Mbola tsy nisy lasibatra manokana noho ny lokon'ny ny hoditro, fa Tiako ny mieritreritra na oviana na oviana aho, na te mankahala zava-dratsy ny olona iray dia ny hanisy ratsy ahy na hamono ahy amin'ny toe-javatra toy ireo isika dia miresaka momba ny. Maha-Kristianina, Foana aho nampahatsiahy ny andininy izay milaza amintsika i Jesosy, mba hiala koa ny takolakao ilany. Raha misy olona mankahala anao, tianao izy ireo na dia eo aza izany. Fanavakavahana dia tsy hitsahatra mitranga, fa raha misy mamely anao, hampody ny takolany hafa. Tsy afaka manao na iza na iza manaiky anao, zavatra toy izany dia tsy ho hitsahatra. Fa mila tokony hieritreritra intsony ny mainty hoditra no hany hazakazaka lasibatra. Ny hany hafa dia, ny fotsy eo amin'ny mainty heloka bevava no hany heloka ho notezaina tao amin'ny vaovao. Ahoana ny fotsy bandy namono ny Hispanika? Na Azia namono ny mainty? Isika noforonina rehetra mitovy. Eny, nisy fotoana tamin'ny fanandevozana rehetra nahalala mainty hoditra, fa ankehitriny misy fanandevozana sy ny fanavakavaham-bolonkoditra isan-mitranga eo amin'ny hazakazaka. Andriamanitra tsy mahita ny fahafatesan'ny ireo lehilahy mainty hoditra misy fomba hafa noho izy mahita ny fahafatesan'ny olon-kafa. Mino aho fa isika dia manadino fa ny foto-kevitra, ny ain'ny olona tsy misy zava-dehibe mihoatra noho ny hafa. Ary aoka isika tsy hanadino koa fa tena tsy mahalala ny tena zava-misy ireo heloka bevava. Trip, Tsy mankahala aho eo amin'ny hira mihitsy, lehibe izany fa ny olona rehetra dia manana ny heviny ary izany no anao. Na dia, Izaho hanao hoe:, Eny mety efa nisy anao, fa kosa mba mahazo naha-fotsy hoditra. Us mainty hoditra dia tsy ny ihany no lasibatra. Andeha isika hiezaka nifankahita ny fijerin'Andriamanitra antsika, 100 mitovy isan-jato.
Danielle • Desambra 4, 2014 amin'ny 10:02 PM • navalin'i
Amin'ny maha-biracial, Color jamba(Eny, satria lovako sy ny kolontsaina samy hafa be loatra ahitana foko mba hanomboka mifantoka amin'ny iray isaky ny mandeha. I mankalaza azy ireny tsy misy ny tsy) vehivavy tsy azoko sary an-tsaina na inona na inona fa ny mainty hoditra dia mandalo. Indrindra rehefa hitsambikina ny olona mahitsy eo amin'ny hazakazaka ka hamela an'Andriamanitra avy ao aminy. Faly anefa aho fa mametraka an'Andriamanitra ao anatiny izay an'i. Izy an'ny eto amin'ity toe-javatra, Ary toy ny an'ny Fitsarana mpanome. Ary matoky izahay an'ny Azy.
Ryan • Desambra 4, 2014 amin'ny 10:49 PM • navalin'i
Antony • Desambra 7, 2014 amin'ny 10:20 PM • navalin'i
Nilalao aho izao fihirana izao ho efitra iray feno olona miezaka hihaino ny mpiara-manompo mitomany omaly. Nisy momba ny 18 ny antsika sy 6/8 dia fotsy. Ny teny simenitra zavatra.
Aoka ho fantatrareo fa ny teny dia tonga ny olona ao amin'ny lalina, fomba tsara tarehy. Misaotra anao noho ny fandinihana marina.
Johnny • Aogositra 13, 2015 amin'ny 7:36 PM • navalin'i
Raha manao izany ny tenanao, na momba ny hazakazaka manokana dia tsy tsy misy ifandraisany amin'Andriamanitra. Ny hira ihany no mampiseho ny antony mahatonga ny fanavakavahana mitohy olana toy izany ve, satria tsy misy olona vonona ny hanova ny tsingerina ihany no mitaraina momba ny fomba tsaboina izy ireo zara raha fotsy, Mexican, Asian, maty ny olona ao amin 'ny fomba rehetra ny fotoana amin'ny alalan'ny manao heloka bevava ary rehefa nijanona ny olona iray no nanaiky ho mpiaro. Ny na ny rariny tanteraka na ianao dia tsy misy tsara tsipika na fialan-tsiny. Ianao mitondra ny tahotra sy ny fahatezerana, Andriamanitra tsy ao ireo mbola misafidy ny ho. Ianao mametraka an'Andriamanitra amin'izany ka h fotsiny ny Kristianina mba mihaino anao foana fa dia manao ny tsara fa tsy nijoro ho an'Andriamanitra ny ny tononkira hoe iany ny hiaro ny fanavakavahana fa ny handeha hanao tis hira momba ny fanavakavahana fa tsy Andriamanitra. Tsy afaka mipetraka amin'ny 2 latabatra ianao na mipetraka eo amin'ny latabatra na raha toa ny Ray, na mipetraka eo amin'ny latabatry ny lavo. Na ahoana na ahoana ianao very mpankafy. Manantena aho fa afaka tonga teny amin'ny fahatahorana sy ny fanajana ny fomba tsotra dia nizara hanova tahotra ho fanajana sy ny miara-miasa. Raha coulda efa anao, dia angamba tokony handinika indray ianao ny fiainanao safidy.
Jon • Aogositra 17, 2015 amin'ny 12:00 aho • navalin'i
Izy tsy manohitra ny polisy tsara? Tsy mino aho. Tiako diany ka tsy hiandry mandra-rakikira manaraka, isaky izay mety. Great hira.
miresaka momba: 257 || Ry Trip Lee, I hihaino anareo – rava Magazine
Kianna • Mey 20, 2016 amin'ny 4:30 PM • navalin'i
Vao avy nihaino ity hira sy ny tononkira dia mahery vaika. “Aiza ny fanantenana ny amin'ny?” -Trip Lee. Tiako izany!
marika • Novambra 21, 2016 amin'ny 6:43 PM • navalin'i
Ataovy izay rehetra rahalahiko, rahavavy, diso fanantenana, ary hanisy ratsy. miala tsiny aho. Aho anjara amin'izao maha-Amerikana. Fa mihaino aho. Reko ny fanaintainana.
miala tsiny aho.
Ny teny dia mahazo avy. tsy misy tsikera, fitiavana ihany.
Agen slot • March 23, 2018 amin'ny 7:02 PM • navalin'i
Hi! Fantatro izany-eny karazana lohahevitra fa
ilaina ny manontany. Ve fananganana bilaogy orina tsara toy ny anao goavana mitaky ny vola
asa? Vaovao tanteraka aho na izany aza ny bilaogy aho manoratra ao amin'ny diariny isan'andro.
Te-hanomboka bilaogy aho afaka mizara ny zavatra niainany manokana
sy ny fihetseham-po an-tserasera. Trarantitra ianao, aoka aho hahafantatra raha misy
tolo-kevitra na toro-hevitra ho an'ny tompon'ny blaogy naniry vaovao.